मध्यभोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ मध्यभोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ?
मध्यभोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ?
Sindhu Khabar सोमबार, २०७८ असोज ११ / ११:४६
काठमाण्डौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि सोमबार आईपीओ बाँडफाँट गरेको छ । आइपीओ सबैलाई परेको छ । एक जना आवेदकलाई कम्तीमा ४० कित्ता परेको हो ।
कम्पनीले गत साउन ५ गतेदेखि ३२ गतेसम्म आयोजना प्रभावित स्थानीयमा विक्री गरेको आईपीओ सोमबार बाँडफाँट गरेको हो। विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको कार्यालयमा भएको बाँडफाँटमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गतका १८० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिने आवेदकलाई माग बमोजिम सेयर दिइएको छ।
१९० कित्तादेखि ४०० कित्तासम्म माग गर्ने आवेदकहरु मध्येबाट थप २ हजार ३१३ जनालाई गोलाप्रथाको माध्यमबाट थप १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गतका आवेदकहरुले १९० कित्तासम्म सेयर हात पारेका छन्।
त्यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्र बाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्र अन्तर्गत कुल आवेदकमध्येबाट १० कित्तादेखि ४० कित्तासम्म माग गर्नेलाई माग बमोजिम र ५० देखि ४०० कित्तासम्म माग गर्नेलाई गोलाप्रथाको माध्यमबाट ४० हजार ५४८ जनाले थप १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन्।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्र अन्तर्गतका आवेदकले अधिकतम ५० कित्तासम्म सेयर पाएका छन्।
यस आईपीओमा १ लाख ८ हजार ५२७ जनाले आवेदन दिएको विक्री प्रबन्धकको भनाइ छ। कुल आवेदकमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत १२ हजार १४७ जना आवेदक रहेका थिए। यी मध्ये ४९ जनाको आवेदन रद्द भएको र योग्य १२ हजार ९८ जना आवेदकहरुमा सेयर बाँडफाँट गरिएको हो।